Applied Chemistry Research Department | Department of Research and Innovation : Ministry of Education (Science and Technology)
Home Applied Chemistry Research Department
မြန်မာ့သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ သုတေသနဦးစီးဌာနတွင် သိပ္ပံပညာရပ်မျိုးစုံအား သုတေသနပြု ဆောင်ရွက်နေသော သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးဌာန (၁၀)ခုတွင် လက်တွေ့ဓာတုဗေဒသုတေသန ဌာန သည် တစ်ခုအပါအ၀င် ဖြစ်ပါသည်။(၁ – ၄ – ၂၀၁၅) ခုနှစ်မှ စတင်၍ မြန်မာ့သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ သုတေသနဦးစီးဌာနအား ဖွဲ့စည်းပုံ အသစ်ဖြင့် သုတေသနနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှု ဦးစီးဌာနအဖြစ် ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်း တည်ထောင်ခဲ့ပါ သည်။ ၄င်းဦးစီးဌာနကြီး၏ လက်အောက်တွင် သုတေသနပင်မဌာန (၂)ခု ရှိပါသည်။ ၄င်းတို့မှာ အီလက်ထရောနစ်နှင့် ပြန်ဖြည့်မြဲစွမ်းအင်ဦးစီးဌာန နှင့် ဓာတုနည်းပညာသုတေသနဗဟိုဌာနတို့ ဖြစ်ပါသည်။ လက်တွေ့ဓါတုဗေဒသုတေသနဌာနသည် ဓာတုနည်းပညာ သုတေသနဗဟိုဌာန၏ဌာနခွဲတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ၁၉၅၄ခုနှစ်မှစ၍ယနေ့အထိသုတေသန လုပ်ငန်းပေါင်း(၂၀၀)နီးပါး‌ ေဆာင် ရွက် ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။အ‌‌ဓိကနယ်ပယ်များမှာ
လက်တွေ့ဓါတုဗေဒသုတေသနဌာန၏ သုတေသနလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးရေးကဏ္ဍ မျှော်မှန်းချက်မှာ
စက်မှုလုပ်ငန်း အထောက်အကူပြု အသုံးချဓာတုဗေဒ သုတေသနလုပ်ငန်းများကိုနိုင်ငံတကာအဆင့်မှီလုပ်
– ပြည်တွင်းထွက်ကုန်ကြမ်းများ၊သယံဇာတများနှင်‌့စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ မှ စက်မှု၊ စိုက်ပျိုး၊ ဆေး၀ါး၊ အလှကုန်လုပ်ငန်း အထောက်အကူပြုနှင့်လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်နိုင်ရန်။
– အသုံးချဓါတုဗေဒ သုတေသနလုပ်ငန်းများဖြင့် စက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးရန်။
-အရည်အသွေးပြည့်မှီသောလူသုံးကုန်ပစ္စည်းများအားစီးပွားဖြစ်ထုတ်လုပ်နိုင်သော နည်းပညာများကို အသေးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များ သို့နည်းပညာလွှဲပြောင်းပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။
Gasifier များမှထွက်ရှိသော ကတ္တရာဖယ်ထုတ်ရန် လိုအပ်သော Catalyst များထုတ်လုပ်ခြင်း။
စွန့်ပစ်ပလပ်စတစ်မှ ဒီဇယ်လောင်စာ စမ်းသပ်ထုတ်လုပ်ခြင်း။
အရက်ဆီထုတ်လုပ်သောစက်ရုံမှ စွန့်ပစ်ရေများကိုအသုံးပြု၍ Green house အဆင့် Nannochloropsis မိုက်ခရိုအယ်လ်ဂျေး မွေးမြူခြင်း ဖြင့်သန့်စင်ခြင်း။
ရေသန့်စင်ခြင်းတွင် အသုံးပြုသော ဆယ်လူးလို့စ်အက်ဆီတိတ် အလွှာပါးကိုဝါးပင်မှ ထုတ်လုပ်ခြင်း။
General Water Filter စမ်းသပ်ထုတ်လုပ်ခြင်း။
ဖော့စဖိတ်၊ အလူမီနီယမ် အက်ဆီတိတ်၊ ဆိုဒီယမ် အက်ဆီတိတ်၊ ဇင့်စတီးယား ရိတ်၊ ဂလစ်စရောမိုနိုစတီးယားရိတ်၊မဂ္ဂနီဆီယမ်ကာဗွန်နိတ်စမ်းသပ်ထုတ်လုပ်ခြင်း။
ဆေးဘက်ဝင်အပင်အမျိုးမျိုးမှ Herbal Soap နှင့် Antiseptic Soap စမ်းသပ် ထုတ်လုပ် ခြင်း။.
ကွန်ကရစ်လုပ်ငန်းသုံးပရိုတင်းအခြေခံအမြုပ်ထဆေး ( Protein Based Foaming Agent )ထုတ်လုပ်ခြင်း။
လောင်စာပျစ်တွဲစေသောပစ္စည်း (Fuel Thickener) ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာ
ကွန်ကရစ်လုပ်ငန်းသုံးပရိုတင်းအခြေခံအမြုပ်ထဆေး (Protein Based Foaming Agent ) ထုတ်လုပ်ခြင်းနည်းပညာ
ဆေးဘက်ဝင်အပင်အမျိုးမျိုးမှ Herbal Soap နှင့် Antiseptic Soap စမ်းသပ် ထုတ်လုပ်ခြင်း။.
ဆေးဘက်ဝင်အပင်များမှ Herbal Soaps နှင့် Antiseptic Soaps ထုတ်လုပ်ခြင်း
၂၀၁၄ခုနှစ်တွင် ထွန်းရေပေါ်အုတ် ကွန်ကရစ်လုပ်ငန်း နှင့် ၂၀၁၅ခုနှစ်တွင် Myanmar Industrial Valley Co., Ltd. သို့ ကွန်ကရစ်လုပ်ငန်းသုံး ပရိုတင်းအခြေခံအမြုပ်ထဆေး ထုတ်လုပ်ခြင်း နည်းပညာလွဲပြောင်းခြင်း
အရက်ဆီချက်စက်ရုံများမှစွန့်ပစ်သောရေဆိုးများကိုNannochloropsis sp.မိုက်ခရိုအယ်လ်ဂျေးကိုအသုံးပြု၍Green House အဆင့်စိုက်ပျိုးခြင်းဖြင့်ပြုပြင်ခြင်း
ဓာတုနည်းပညာသုတေသနဗဟိုဌာနသို့လာရောက်လေ့လာခဲ့ကြသောရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၊ ကုန်ထုတ်ဓာတုဗေဒဌာနမှ ကျောင်းသား/သူများနှင့် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၊ ဓာတုဗေဒဌာနတွင် ဖွင့်လှစ်သောပတ်ဝန်းကျင် ဆိုင်ရာသင်တန်းမှ ဆရာ၊ ဆရာမများနှင့် သင်တန်းသားများကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ မေလ (၁၁)ရက်နေ့ တွင်လည်း‌ကောင်း လက်တွေ့ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော သုတေသနလုပ်ငန်း များကို ရှင်းလင်းပြသပေးခဲ့ခြင်း
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၃၀)ရက်နေ့ တွင် သုတေသနနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုဦးစီးဌာနနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ စက်မှုကြီးကြပ်ရေးဦးစီးဌာနအောက်ရှိ၊ အသေးစားနှင့် အလတ်စား လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဌာနတို့ ပူးပေါင်း၍ SME လုပ်ငန်းရှင်များ လိုအပ်လျက် ရှိသည့် နည်းပညာများကို ပံ့ပိုးကူညီပေးနိုင်ရန်အတွက် “နည်းပညာဆိုင်ရာ Awareness များ Sharing ပြုလုပ်ခြင်း အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ” ပြုလုပ်၍ နည်းပညာများ ဖြန့်ဝေခြင်းင်း
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်သိပံ္ပ္ပံံ့့့့့့ ပွဲခင်း ္ပံ၂၀၁၆